ULorch uthi ubengakile ukuthi usedlale imidlalo engu-100 kwiPremiership - Impempe
Iqede ukuqagela iPirates yethula umqeqeshi omusha ozovala esikaZinnbauer
UDoctor Khumalo uvuleleke ngemali ayeyihola efika kwiKaizer Chiefs
AmaZulu acathamela uMonare, angase abolekwe nabanye yiPirates
Umshushisi wePSL uqinisekisa icala elingase libuyise iCosmos ehlathini
IPirates idayise uMntambo, kodwa ithi uzobuya ngelinye ilanga
IChiefs ifunde ‘kuyise’ ishaya iRoyal AM ngeshibobo ngomdlali weSwallows
Sekushoda abambalwa kuphelele izinongo zomhluzi ophekwa yi-Chiefs
ULorch uthi ubengakile ukuthi usedlale imidlalo engu-100 kwiPremiership
January 26, 2021 Impempe.com
UThembinkosi Lorch ubedlala umdlalo wakhe ka-100 ngaphansi kwesigaba esiphezulu kwiPremier Soccer League (PSL) ngesikhathi behlula iMaritzburg United ngo 1-0 emdlalweni weDStv Premiership ngempelasonto, kodwa yena ubengakwazi lokho. Lo mdlali oyisilomo futhi ongaconsi phansi kubalandeli beBucs, uze wezwa ngemuva komdlalo ukuthi kanti bekuwusuku olubaluleke kangaka.
“Bengingazi kuze kube khona ongazisile ngemuva komdlalo. Akuyona into ebengiyinakile leyo,” usho kanje uLorch engxoxweni abe nayo nabe-website yePirates.
Uthe into enkulu ayizuzile kule midlalo engu-100 ukuklonyeliswa kwakhe ngendodo yokuba nguMdlali oVelele ngesizini ka2018/19.
“Ngiyacabanga ukuthi into enkulu esengiyizuzile bekukule sizini engawina ngayo indondo yokuba nguMdlali oVelele kuPSL. Impela kwaba yinto enkulu kimi,” kusho lo mdlali oneminyaka engu-27.
” Manje sengifuna ukuwina ezinye izindebe neqembu. Ngisafuna futhi nokuphinde ngiwine indondo yokuba nguMdlali oVelele. Kwaba yinto enhle kakhulu kimi. Ngicabanga ukuthi ngisangakuphinda,” kuqhuba yena.
Uthe njengoba iPirates ikwazile ukuqeda ishobolo lokungaziwini izindebe ngesikhathi ithatha eyeMTM8 kule sizini, sekumele basebenze kanzima ukuze bayilamanise.
“Ngicabanga ukuthi kumele sibambe umgqigqo owodwa. Kumele sisebenze ngokuzikhandla, sisizane. Ngicabanga ukuthi uma singenza njalo, sizokwazi ukuwina ezinye izindebe,” kuchaza uLorch owasayina kuBucs eneminyaka engu-21 esuka kuMaluti FET, kodwa wabolekiswa kwaze kwaba uyakulungela ukuzodlala kwiPirates.
Previous Previous post: Inhloko yabaxhasi iMomentum yenelisekile ngeBlack Day yabesifazane
Next Next post: Iphinde yenqaba namaphuzu iBaroka ibamba iChiefs